China Tapered ala agba Manufacturer na Supplier | Lixin
A na-echepụta ihe ndị na-agba agba ọsọ iji jikwaa nrụgide na ibu ọrụ na-arụ ọrụ na gburugburu.
Ezubere agba ala na-ebu ma na-ebu ma na-ebu ibu ma na-enwe akụkụ anọ: cone, ma ọ bụ mgbanaka dị n'ime; iko, ma ọ bụ mgbanaka mpụga; ihe ndị ahụ a pịrị apị, ma ọ bụ ihe ndị na-awụlikwa elu; na onu, ma ọ bụ ala na-ejigide.
Tapered ala agba tumadi na-ebu radial, axial jikọtara ibu na radial ibu na isi. Ikike nke ibu axial na-ebu na-adabere na nkuku kọntaktị nke ụzọ mgbaaka mgbanaka. Nnukwu akuku kọntaktị ahụ, ikike ka ukwuu ga-adị.
Na n'akuku n'etiti raceway generatrix na akara, na-agba nwere ike ibu ibu na ndị ọzọ Tapered ala biarin, ọ tumadi na-agba nkwonkwo ibu dabere na otu ụzọ axial ibu, ma ọ bụghị naanị radial ibu.
Tapered ala biarin nwere tapered n'ime na elu mgbanaka raceways, The tapered ala dị n'etiti abụọ raceways. Nke a na ụdị biarin bụ na-emekarị separable, ya bụ ndị na-ejigide, n'ime mgbanaka na elu mgbanaka nwere ike arụnyere iche. Ha nwere ike iguzogide nnukwu ụzọ ntụgharị radial na ụfọdụ ọrụ axial. Emere ha n'ụdị na ụdị dị iche iche iji hụ ụdị ọrụ niile.
Mara: Nke a bụ nanị obere akụkụ nlereanya nọmba nke Tapered ala biarin anyị nwere, ọ bụrụ na ị na-ada na-ahụ onye na ị chọrọ, biko kpọtụrụ anyị ozugbo. Daalụ n'ọdịnihu.
Tapered ala biarin na-ebe etinyere igwe ngwá spindles, gia Mbelata nkeji, akpakanamde transaxles, transmissions, inyefe na nkume igwe nri, Ngwuputa, Metallurgical ụlọ ọrụ, plastic ígwè, n'ụlọ ngwa, electric Motors, nfuli, ígwè na ndị ọzọ na akpakanamde mmiri.
Nke gara aga: Deep uzo Ball Iburu
Osote: Bọọlụ Glass
30208 Taper ala agba
30306 Taper ala agba
Ugboro abụọ Ahịrị taper ala agba
Anọ ahịrị Taper ala agba
Anọ ahịrị Cylindrical ala agba, Cylindrical ala agba 20x47x14, Obere ọla kọpa, Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala agba, Brass Ball Lelee Valve, Cylindrical ala agba 25x52x15,